Uvavanyo lwejubane lwe-intanethi
Uvavanyo loViwo lwe-Intanethi luni?
Uvavanyo lwejubane lwe-intanethi yinkqubo yokuhlalutya iiparitha zokuxhumela kwi-intanethi ngokuthumela ifayile encinci esuka kumncedisi kunye nokulinganisa ixesha elifunekayo ukukhuphela uze ulayishe ifayile kwakhona kumncedisi. Ngendlela, iiparitha ezifana ne-jitter kunye nokulahleka kwepakethi zingabalwa. Ezinye iimvavanyo zentsholongwane zibuye zilinganise i-ping, yithuba lokuba umyalezo wenze uhambo olujikelezayo ukusuka kumthumeli ukuya kwindawo ekuya kuyo nangemuva, ngokuthumela iProsoft Control Message Protocol (ICMP).
Iimvavanyo eziphambili zejubane zinamaseva amaninzi amaninzi kuwo wonke umhlaba, ovumela umsebenzisi ukuvavanya isivinini se-intanethi kwiindawo ezahlukeneyo. Kukulungele ukuvavanya ijubane kunye nomncedisi osondele kwiseva yewebhusayithi okanye isicelo sewebhu esetyenziswayo; ngenye indlela, isantya esichaziweyo asibonakali sisantya sokusebenza esisebenzayo.
I-ping yindlela yokuphendula ngayo-ixesha lokukhawuleza ufumana impendulo emva kokuba uthumele isicelo. I-ping yokukhawuleza ithetha uxhumano oluthe xaxa, ngakumbi kwizicelo apho ixesha liphela (njengemidlalo yevidiyo). I-Ping iyalinganiswa kwimillisecond (ms).
Yiyiphi iVashish Speed?
Isantya sokukhuphela kukukhawuleza ukuba ungadonsa idatha kwiseva kuwe. Unxibelelwano oluninzi lujoliswe ukukhuphela ngokukhawuleza kunokuba lulayishe, kuba uninzi lwentsebenzo ye-intanethi, njengokulayisha i-web pages okanye amavidiyo omculo, aqukethe ukulandwa. Isantya sokulanda silinganiswa kwimigabits ngesibini (Mbps).
Yintoni iVelo yokuLawula?
Ijubane lokulayisha lihamba ngokukhawuleza ukuthumela idatha kuwe kuwe kwabanye. Ukulayisha kuyimfuneko yokuthumela iifayile ezinkulu nge-imeyile, okanye usebenzisa ingxoxo yevidiyo ukuthetha nomnye umntu kwi-intanethi (kuba kufuneka uthumele ukutya kwevidiyo yakho kubo). Ijubane lokulayisha lilinganiselwa kwiimigabits ngesibini (Mbps).